१४९ वर्षपछि गुरु पुर्णिमाकै दिन चन्द्रग्रहण, जान्नुहोस्, कुन राशीलाई कति फाइदा ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more १४९ वर्षपछि गुरु पुर्णिमाकै दिन चन्द्रग्रहण, जान्नुहोस्, कुन राशीलाई कति फाइदा ?
असार ३१ गते, २०७६ - १०:३४
काठमाडौं । अाज मंगलबार राती चन्द्रग्रहण लाग्न गइरहेको छ । यसवर्ष अषाढ मसान्तको पूर्णिमाका दिन गुरु पूर्णिमाका दिन चन्द्र ग्रहण भइरहेको छ । नेपाल, भारतका साथै अष्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा देखिने यो ग्रहण नेपालमा भने राती एक बजेर ४५ मिनेटमा शुरु हुने छ । यसको मोक्ष भने बिहान ४ बजेर ४५ मिनेटमा हुनेछ ।
असार ३१ गते, २०७६ - १०:३४ मा प्रकाशित